Mmmelon anozvarwa, iyo Spanish yekutanga iyo inozochinja nzira yekubatana | ECommerce nhau
Zvinoenderana neazvino Harris Interactive kudzidza, vanhu vanonyatsoshandisa chete 45% yenguva kugadzirisa basa ravo. Izvi zvinoreva kuti vashandi nemapoka vanoshandisa inopfuura hafu yenguva yavo pazvinhu zvine chekuita nebasa. Izvi zvinogadzira kushushikana uye zvinodzivirira zvinhu kuti zviitwe nenguva. Muchirevo ichi anozvarwa mmmm, 100% Spanish kutanga-iyo kuri kuchinja nzira ye shanda seboka.
mmmm chishandiso chekutanga chakanangana nezvikwata zvakanangiswa pa ruzivo rwevashandisi: -kudzvanya zviito, nekukurumidza kugadzirisa. Inowanikwa pawebhu, desktop uye nhare, mmmelon inovimbisa kutora timu kugadzirwa kune imwe nhanho. Iyi mhinduro yegore yakagadzirirwa hupenyu hwezuva nezuva-inobvumidza masisitimu akadai seemail, mafaera emafaira kana mafoni anosiiwa kumashure, achipa chishandiso chekubatana pakati peboka nenzvimbo yaro.
mmmelo inoratidzira nhanho nyowani mukutungamira kwezuva nezuva basa kubatsira kurerutsa maitiro yezvikwata uye ronga zvinonyanya kukosha zvakajeka. Zvibereko zvechiitiko nezvikwata nevatengi, Henry Garden (muvambi uye CEO wemmmelon) akaona zvakajeka kudiwa kwekuvaka nharaunda umo vashandi vese vanonzwa kugadzikana. "Takanga takajeka kuti nzira yekushanda sechikwata yaifanira kuchinja, uye nenzira imwecheteyo hukama nevatengi nevashandi vaidikanwa kuputsa zvipingaidzo", Enrique anotsanangura. Aya ndiwo mabudiro akaita mmmelon, iyo, kuburikidza neyakareruka, inokurumidza uye inoratidzika interface, inoendesa kugadzirwa kune zuva nezuva uye inosimbisa kutaurirana sechinhu chepakati.
1 Mmmelon maapplication
2 Nezve mmmelon
Kunyangwe mmmelon inogona kushandiswa kubva mmmelon.com, desktop desktop inoita kuti zvikwanisike kuti mmmelon igare ichiwanika uye nekungobaya chete, pamwe nekugamuchira pakarepo ziviso. Mmmelon maapplication anowanikwa kuMac, Windows (32-bit uye 64-bit) uye Linux (32-bit uye 64-bit). Uye zvakare, nekutenda kune mapfupi ekhibhodi emamirimoni emakomputa ekushandisa, mabasa anogona kugadzirwa kubva chero kupi, kunyangwe iwe uri kushandisa imwe application panguva iyoyo.
mmmelon zvakare inopa iPhone app. Nezviito zvinokurumidza uye zvese zvinoshanda zvemmmelon mukubata kumwe chete, iko kushanda ndeimwe sarudzo uye nhanho yekutanga yemasevhisi ako ekushandisa.
mmmelon inopa mushandi wega wega chiratidzo chakajeka chezuva ravo, achivaratidza pavanowana iwo akakosha mabasa avanofanira kuita uye vachibvumira, mumasekondi, kupedzisa mabasa, kurodha mafaera, kutumira mhinduro kana kuwedzera mabasa matsva. Kutsvaga mafaera, mapurojekiti kana mabasa mu mmmelon ndezvenguva pfupi yekutenda kune chaiyo-nguva yekutsvaga, uye nekukurumidza kupihwa kwemabasa kune vamwe vanhu kunobatsira kusiya chero chinhu chisina kugadziriswa.
Kune rimwe divi, vashandisi vanoziviswa zvega neshanduko uye nhau dzinoitika mumabasa avanotora chinhanho. Vanhu vari kunze kwechikwata vane zvakare nzvimbo yavo mmmelon, nebasa ravo rinotsanangurwa nenhengo dzechikwata uye izvo zvinovatendera kuti vasvike chete kwavakapihwa mukana.
mmmelon ikambani ine 100% Spanish capital, inogara muMadrid, uye inotsigira vashandisi vanobva pasirese pasirese. Iyo parizvino inowanikwa muChirungu neSpanish, kune ese mabhurawuza (kuburikidza newebhu), makomputa (kuburikidza nekushandisa kweMac, Windows neLinux) nemidziyo yeApple, kunyangwe mitauro mitsva uye kuenderana nePad, Apple Watch nenhare mbozha nekukurumidza svika Android.
Kunyoresa kuri pachena uye kunotora kweminiti chete. Kwemazuva makumi mashanu maakaundi ese matsva ane mukana wekuwana; mushure menguva ino pane zvemahara uye zvakabhadharwa zvirongwa, zvinoenderana nezvinodiwa nechikwata chimwe nechimwe.
Kutanga kuyedza mmmleon, saina pa mmelon.com/register uye pinda iyo data. Paunenge wapedza wagadzirira kutanga kushandisa mmmelon yemahara uye isina muganho panguva yekuyedza kwemazuva makumi mana nemashanu. Pakupera kweiyi nguva yekuyedza iwe unozogona kusarudza kuti nderipi zano rinokodzera zvaunoda.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Zvechokwadi uye nhau » StartUps uye vanamuzvinabhizimusi » Mmmelon anozvarwa, iyo Spanish yekutanga iyo inozochinja nzira yekubatana